Iminqweno yeeFudo | Ngeentlanzi
Njengoko sonke sisazi, okanye ubuncinci siya kuba siqaphele, zimbalwa izilwanyana ezinokuthula kunye nomonde onazo ufudo. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba asinako ukumangaliswa bubuchule babo kunye nomdla wabo. Nokuba loluphi uhlobo lwesidalwa esilubonayo okanye esinalo ekhaya, ngokuqinisekileyo sinokuhlala sichukumiseka ziimpawu zalo, imikhwa kunye nezinto ezibonisa umdla. Ngesi sizathu, namhlanje, sikuzisela ezinye iinyani ezimnandi Olu hlobo lwezilwanyana, esinokuba nalo ekhaya.
Ngokuqinisekileyo uvile ngaxa lithile ukuba amafudo akhala. Oku akuyonyani ngokupheleleyo, ezi zilwanyana azikhali, kanye xa ufudo lwaselwandle ludada lusiya elwandle, baqala ukukhupha ityuwa abayifunxileyo emanzini ngamehlo kwaye oko kwenza ukuba kubonakale ngathi bayakhala.
Omnye we iinkalo umdla of Ufudo Kwaye kungenxa yamabali amaninzi kunye namabali esiwavileyo okoko sasingabantwana yiminyaka yezi zilwanyana. Umndilili weminyaka yoofudo abahlala kwiziQithi zeGalapagos yiminyaka engama-80. Nangona kunjalo, kwindawo ebekwe kumazantsi-ntshona e-China, ebizwa ngokuba yi-Hainan, kukho ufudo oluthi ngokwabaphandi lungaphezulu nje kweminyaka engama-500 ubudala, olwenza ukuba lube sesirhubuluzi esidala kunazo zonke ezikhoyo emhlabeni.
Enye ye Iinkolelo ezithandwayo ezikhoyo ngokubhekiselele kwiifudo, kukuba xa bewile ngobuso abanakuphinda bajike kwakhona baze balale ngobuso phantsi, kodwa ayiyonyani leyo. Xa ufudo lusempilweni entle, lunokujika ngokugqibeleleyo kwaye luqhubeke luhamba ngokuzolileyo ngaphandle kokuhlangabezana nengxaki enkulu. Kwelinye icala, ukuba impilo yayo ibuthathaka okanye ukuba indala, kunokuba nzima kakhulu ukuba sijike.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Ufudo » Iminqweno yeeFudo